Wasiir kashifay wad-hadal Kenya ay kula jirto DF oo ku saabsan badda - Caasimada Online
Home Warar Wasiir kashifay wad-hadal Kenya ay kula jirto DF oo ku saabsan badda
Wasiir kashifay wad-hadal Kenya ay kula jirto DF oo ku saabsan badda
Nairobi (Caasimada Online) – Wasiirka arrimaha Dibada ee Kenya Haweeneyda lagu magacaabo Monica Juma, ayaa waxay daboolka ka qaaday inuu hada soconayo wadahalo qarsoodi ah oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo dalkeeda oo ku saabsan muranka dhanka Badda.
“Waxaan leenahay Urur goboleedka IGAD halkaasoo aan ku xalin karno murankeena. Waxaa jira heshiis is fahan oo aan xukuumada Muqdisho kula jirno, taasoo xoojinaya xiriirka Diblumaasiyadeed ee labada dal iyo macnaha wadaxaajoodka,” ayay hadalkeeda raacisay.
“Dabcan wadank wuxuu haystaa ikhtiyaarro kala duwan oo ay kamid tahay inuu tago maxkamad, laakiin Soomaaliya waxaan la leenahay xiriir aan kala go’lahayn. Walina waxaan sahmineynaa dhamaan wadooyin kale,” ayay tiri Wasiiradda.